ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ၃၅ မီလီမီတာ Full Frame ကင်မရာကို 61 MP image sensor နှင့် မိတ်ဆက် - Yangon Media Group
စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ စတင်ရောင်းချမှ ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
Sony မှ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံးအဖြစ် ၃၅ မီလီမီတာ A7R IV Full Frame Mirrorless ကင်မရာကို 61 MP image sensor နှင့်အတူ မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ A7R IV မတိုင်ခင်က A7R III ကို ရောင်းချခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီကင်မရာကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ စတင်ရောင်းချမှ ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
မယုံနိုင်စရာကောင်းတာက A7R III တုန်းက Image sensor အနေဖြင့် 42.4 MP ကိုသာ တပ်ဆင်ထားပေမယ့် ယခု A7R VI မှာတော့ 61 MP အထိ တိုးမြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sony ရဲ့ အဆိုအရ ဒီကင်မရာဟာ CMOS Image Sensor ကို တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ၃၅ မီလီမီတာ Full Frame ကင်မရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဇီုင်းပုံစံဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာ noise ထခြင်းနှင့် Sensitivity တို့မြင့်ခြင်းတွေကို လျော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Image Stabilization အတွက် 5-axis Optical ကို ကိုယ်ထည်အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ဆင်ဆာအသစ်ဟာ ကာလာ Pixel အရောင်ပေါင်း ၅.၇၆ သန်းအထိ အရည်အသွေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး ယခင် A7R III ထက် ၁.၆ ဆ ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ frame per second အနေဖြင့် ပုံမှန် 60 fps အပြင် အမြင့်စား ဓာတ်ပုံ အရည်အသွေးအတွက် 120 fps တွေကိုပါ ရွေးချယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အသေးစား ဓာတ်အားစနစ်နှင့် တစ်အိမ်သုံး ဆိုလာစနစ်ဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင??
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရန် ငွေလှူဒါန်းခဲ့ကြသည့် မြောင်းမြ၊
ကျိုက်မရောမြို့နယ် ဖားဘောင်ဂူ ထုံးကျောက်တောင်ကို သဘာဝကြိုးဝိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်း??
သက်ငယ်မုဒိမ်းဆိုင်ရာမေးခွန်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တင်ထားပြီဟုဆို
မိတ္ထီလာမြို့ပေါ် အုတ်ခုံကိုဝင်တိုက်ပြီးထားခဲ့သောကားနောက်ခန်းမှ ဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးနေသည့် အေ